Pokemon Go fanavaozana APK izao dia azo sintonina | Androidsis
[APK] Fanavaozana Pokemon Go miaraka amin'ny fanatsarana ny fahombiazana sy ny fanohanana ny Android N.
Francisco Ruiz | | apk, Lalao Android, Pokémon Go
Androany 13 Jolay 2016, Niantic vao nanomboka a fanavaozana Pokemon Go vaovao izay misy ny fanitsiana bibikely, fanatsarana ny fahombiazana ary ny fanohanana ofisialy an'ireo fitaovana mihazakazaka Android 7.0 Nougat. Ity fanavaozana ity dia misy amin'ny fomba ofisialy amin'ny alàlan'ny fivarotana fampiharana Apple sy Android, na izay mitovy amin'ny App Store sy Play Store, ireo mpampiasa nametraka ny fampiharana ihany, mazava ho azy, no handray azy io. raha iray amin'ireo mpampiasa tsy afaka niandry ny famoahana ofisialy Pokemon Go tao amin'ny magazay fangatahana ianao ary napetrakao amin'ny alàlan'ny APK ny lalao, matokia fa ho afaka ihany koa ianao havaozy ny fangatahanao Pokemon Go amin'ity kinova ofisialy farany ity natomboka androany.
Avy eo amin'ny fipihana fotsiny «Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity», hanana ny fidirana amin'ny fampidinana mivantana ity apk vaovao Pokemon Go ity amin'ny kinova 0.29.2, ary koa hanazava ny fomba fametrahana marina ho an'ny mpampiasa vaovao na ny fanavaozana ho an'ireo mpampiasa izay nametraka ny kinova taloha koa amin'ny alàlan'ny APK. Ho fanampin'izany rehetra izany, izay tsy kely akory, dia hanazava ny antsipiriany rehetra momba ny olana ara-tsiambaratelo nananany ihany koa izahay, farafaharatsiny mandra-pahatongan'ny fanavaozana farany ny Pokemon Go, ilay lalao izay niteraka fahatsapana eran'izao tontolo izao.
Ao amin'io kinova vaovao an'ny pokemon go, ankoatry ny fanatsarana ny fahombiazan'ny zava-bita, ny fanamboarana bibikely, ary ny fanohanana ny Android 7.0 Nougat dia nisy ihany koa namaha olana momba ny tsiambaratelo izay efa hitan'ny mpampiasa sasany amin'ilay lalao tao amin'ny fampiharana.
Tokony holazaina sy hazavaina fa tsy ny terminal rehetra no omena tsiny noho ity olana momba ny tsiambaratelo ity, na koa ny mpampiasa rehetra voasoratra anarana amin'ny kaonty Google azy ireo, na dia toa mazava aza fa io olana momba ny tsiambaratelo io dia nijaly tamin'ny mpampiasa sasany izay nampiasain'ilay fampiharana Pokemon Go dia niditra tao amin'ny kaonty Google izay tsy nilaina tamin'ny lalao, izay tadiavin'i Niantic sy ireo tovolahy avy amin'ny Nintendo handamina ny olana amin'ny fotony, handefa ao anatin'ny herinandro fotsiny ny famoahana ofisialy ny kinova Pokemon Go voalohany, izay efa ny kinova ofisialy faharoa an'ny Pokemon Go izay manala tanteraka ireo heverina ho olan'ny tsiambaratelo amin'ny fampiharana izay tsy isalasalana fa ny lalao lamaody eran'izao tontolo izao.
1 Saingy, avy aiza aho no misintona ny apk an'ity kinova Pokemon Go vaovao ity?
2 Ary, ahoana no hametrahako ny Pokemon Go amin'ny Android -ko na hanavao ity kinova vaovao ity?
Saingy, avy aiza aho no misintona ny apk an'ity kinova Pokemon Go vaovao ity?
Ny loharano tokana azo antoka ho an'ny ny fisintomana azo antoka an'ity apk vaovao an'ny fanavaozana Pokemon Go vaovao ityAraka ny nambarantsika tamin'ny lahatsoratra teo aloha momba ny fomba fampidinana sy fametrahana Pokemon Go alohan'ny hahatongavany amin'ny fivarotana fangatahana ofisialin'ny Android anao, dia manana izany foana izahay eo amin'ny tranokalan Apk fitaratra amin'ny fikitihana ity rohy ity ihany.
Ary, ahoana no hametrahako ny Pokemon Go amin'ny Android -ko na hanavao ity kinova vaovao ity?
Na ho an'ny mpampiasa vaovao, ireo izay te-hametraka Pokemon Go voalohany ary ireo izay te-hanavao ny Pokemon Go ho an'ity kinova vaovao misy ity, dia samy tsy maintsy manaraka ny dingana mitovy, dingana vitsivitsy izay hotanisaiko etsy ambany.:
Izahay dia mamela ny fahazoan-dàlana hahafahana mametraka rindranasa avy amin'ny loharano tsy fantatra. Ireo fahazoan-dàlana ireo dia ao anatin'ny safidin'ny Security amin'ny Android Settings.
Izahay dia misintona ny apk amin'ity rohy ity ihany.
Raha vao sintonina, ny sisa ataonao dia tsindrio ilay fampandrenesana fampidinana mahomby izay miseho eo amin'ny ridao fampandrenesana Android mihitsy, na, raha tsy mahomby izany, mivezivezy mankany amin'ny làlan'ny Fampidinana miaraka amina mpitety rakitra Android.
Amin'izany dia havaozinao ny lalao Pokemon Go anao amin'ny kinova farany misy. Ankafizo ary manaova soa pokemons mihaza manodidina ny tanànanao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » [APK] Fanavaozana Pokemon Go miaraka amin'ny fanatsarana ny fahombiazana sy ny fanohanana ny Android N.
Carlos Tiscar dia hoy izy:
tsara ve ny lalao finaritra? Amin'ny farany dia voasarika aho! XD
Valiny tamin'i Carlos Tíscar
Andramo izany, na dia heveriko fa mpampiasa an-tapitrisany maro manerantany aza no tsy ho diso. Raha tianao ny mandeha manodidina ny tanànanao ary mahita toerana vaovao, ity lalao ity dia hisarika anao.
Santiago Galindo Gutierrez dia hoy izy:
Tsy hamela ahy hametraka na hanavao izany, ny bokotra INSTALL dia tsy mandeha
Andramo esory ilay kinova taloha ary apetaho ity iray ity ary tsy izany!
Valiny tamin'i Santiago Galindo Gutierrez
Tiako ny Android dia hoy izy:
Valiny amin'ny Android Tiako
Daniel Beltran dia hoy izy:
Tsy hitan'ny toerana GPS izany, olana amin'ny fampiharana ve izany?
Valiny tamin'i Daniel Beltrán
Ahoana ny fanesorana ny referansa rehetra momba ny Pokémon miaraka amin'ity extension ity ho an'ny Chrome
Ny topi-maso faharoa ho an'ny mpamorona Android Wear 2.0 dia efa misy izao